सहि औजारहरू बिना ... | Martech Zone
सहि औजार बिना ...
सोमवार, मे 9, 2011 बिहीबार, अक्टुबर 27, 2011 Douglas Karr
शुक्रबार रात मैले साथी एड्म स्मालसँग एजेन्ट सॉसका सीईओ - ए घर जग्गा मार्केटिंग प्लेटफर्म। पछि, हामीले हेर्न जाने निर्णय्यौं थोर IMAX मा 3D। अन्य चलचित्र पूर्वावलोकनहरू समाप्त भएपछि, प्याक दर्शकहरू बसोबास गरिरहेका थिए ... जबसम्म हामीले थियेटरमा एक चेतावनी चिच्याएको सुनेनौं:
"फोकस! ”, मानिस चिच्याए।
थिएटर मौन थियो ... र केहि मिनेट पछि, अर्को चिल्लायो:
"परियोजना कोठा ... फोकस !!!“… अब एrier्गेियर र ठूलो छ।
ठीक त्यस्तै एक दर्शक सदस्य उद्धार गर्न आए:
"यार, चश्मा लगाऊ।"
दर्शकहरु हाँस्न थाले। थ्रीडी चश्मा बिना (उपकरण), फिल्म हेर्न धेरै थिएन। यसैले मेट्रिक्स र विश्लेषण हरेक अभियानको त्यस्तै महत्वपूर्ण हिस्सा हो। मैले धेरै ग्राहकहरुसँग भेटेको छु जो लाग्छ उनीहरूसँग आफ्नो मार्केटिंग रणनीति, प्रत्येक माध्यम मार्फत उनीहरूको लगानी, र कार्यान्वयन गर्न आवश्यक संसाधनहरूको स्पष्ट समझ छ।
उपकरण बिना पूर्ण मापन गर्न, यद्यपि, परिणाम तिनीहरूले कल्पना गरे भन्दा अलि अस्पष्ट हुन सक्छ! तपाईंले आफ्नो अर्को अभियान कार्यान्वयन गर्नु अघि, निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंसँग तपाईंको चश्मा छ!
रेटिंग्स, समीक्षा र क्रेता आशय
आईट्र्याकशप: वेब क्याम मार्फत आँखा ट्र्याकिंग
मई 10, 2011 मा 11: 00 एएम
डग - मलाई थाहा छ म कसैलाई पनि थाहा पाउँदिन जोसँग जीवनमा तपाईको भन्दा धेरै रोचक मुठभेड थियो। राम्रो पोष्ट!
मई 10, 2011 मा 12: 15 PM
प्रतीक्षा गर्नुहोस्, त्यो वास्तवमै भयो?
मई 10, 2011 मा 1: 36 PM
हो, यो बिलकुल भयो! 🙂